Akụkọ ifo nke ịhụnanya ịhụnanya | Bezzia
Maria José Roldan | 20/06/2022 22:44 | Mmekọrịta
Ihụnanya ihunanya bụ otu n'ime nnukwu ụgha ndị ahụ na-eme naanị n'ụwa na-abụghị eziokwu ma ọ bụ akụkọ ifo nke ihe nkiri ma ọ bụ akwụkwọ. Ụdị ịhụnanya a na-ebute ezigbo echiche n'etiti ndị òtù di na nwunye ahụ na ikwubiga okwu ókè nke ya na-adịghị ka ihe na-eme n'ezie ụwa. Ọ dị mkpa ịpụ na akụkọ ifo ndị a wee soro onye ị hụrụ n'anya biri ezi ịhụnanya.
N’isiokwu na-esonụ Anyị na-ekwu maka usoro akụkọ ifo nke ịhụnanya ịhụnanya na ka akụkọ ifo ndị a nwere ike ịkpata nnukwu mmebi n'ime di na nwunye ahụ.
1 Achọ maka ọkara ka mma
2 ịhụnanya nwere ike na ihe niile
3 Ndị na-emegide onwe ha na-amasị ma na-adọta ibe ha
Achọ maka ọkara ka mma
Echiche nke ọkara ka mma bụ otu n'ime akụkọ ifo ndị metụtara ịhụnanya ịhụnanya. A na-eche na ịhụnanya bụ naanị ya nakwa na e nwere onye n'ụwa nke ga-eme ka anyị nwee obi ụtọ ná ndụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme nnukwu ndudue nke ichere ndụ ha dum maka ọkara ahụ ka mma nke na-agaghị abịa. Ihe a niile bụ ihe ụgha nke na-abụghị eziokwu nke ịhụnanya ịhụnanya na-akpali. Ihe kachasị mma bụ ibi ndụ mmekọrịta dị iche iche na-enyere onye ahụ aka ịkọwa ihe ọ chọrọ n'okwu ịhụnanya.
ịhụnanya nwere ike na ihe niile
Ịhụnanya nke na-apụta n'akụkọ ifo dị ebube ma nwee ike imeri ihe mgbochi ọ bụla a na-etinye n'ihu ya. N'ezie, ihe dị iche na-eme na nke ahụ bụ na ịhụnanya enweghị ike ime ihe niile. A pụghị ikwe ka ịhụnanya nke a na-adịghị akwanyere ụkpụrụ dị iche iche ùgwù. Ọ dịghị ihe na-eme ma ọ bụrụ na ị na-asị mba ịhụnanya na mmekọrịta. Ihe kacha mkpa bụ obi ụtọ nke onwe ya, n'agbanyeghị ma mmadụ na-ebi naanị ya ma ọ bụ onye ọzọ.
Ndị na-emegide onwe ha na-amasị ma na-adọta ibe ha
Ihe nkịtị bụ na mmadụ abụọ nwere echiche dị iche iche na echiche dị iche iche na-anọgide na-enwe mmekọrịta, na-ejedebe na-eche ibe ha ihu mgbe nile. Esemokwu na esemokwu na-aga n'ihu na-emebikarị ụdị mmekọrịta ọ bụla.. N'ọtụtụ ọnọdụ, ndịrịta iche dị otú ahụ gbasara echiche na-ebutekarị nnukwu nsogbu ma a bịa n'ịnọgide na-enwe mmekọrịta a na-ewere na ọ dị mma. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ na-esi ike n'ezie ịnọgide na-enwe mmekọrịta gị na onye dị nnọọ iche na nke dị iche.
Na nkenke, ịhụnanya ịhụnanya dịka anyị ghọtara na ọ na-apụta naanị n'akụkọ ifo. O doro anya na na ndụ n'ezie, ịhụnanya dị nnọọ mgbagwoju anya ma sie ike. Ihe dị mkpa bụ ịnụ ụtọ ịhụnanya nwere ahụike yana nke siri ike na nke na-adịgide adịgide. Enwere usoro ụkpụrụ nke ga-adịrịrị n'oge niile na mmekọrịta, ma ọ bụ ntụkwasị obi, nkwanye ùgwù ma ọ bụ ndidi. Ngwakọta nke ihe a niile na-eme ka ịhụnanya dị mma na ụfọdụ ọdịmma dị n'ime mmekọrịta ahụ. Cheta ịgbapụ dị ka o kwere mee n'ịhụnanya nke na-eme n'akụkọ ifo ma nwee ezi ịhụnanya, tozuru okè na ahụike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọrịta » Akụkọ ifo nke ịhụnanya ịhụnanya